Ungasifaka njani isicelo se-ETIAS
Isebenza njani i-ETIAS ngePasipoti
I-ETIAS yabantu baseMelika
I-ETIAS izakwaziswa ngo-2021
Ukuhamba ukuya kwindawo ye Schengen
I-ETIAS Visa yaseBritane
Sebenzisa ulwazi lokungena esikuthumelele lona nesiqinisekiso somyalelo.
Iphasiwedi Hlaziya kwakhona
Nceda ngenisa idilesi ye email ye-akhawunti yakho. Ikhowudi yokungqinisisa iya kuthunyelwa kuwe. Xa ufumene ikhowudi ukuqinisekiswa, uya kukwazi ukukhetha lokugqitha elitsha akhawunti yakho.
Faka isicelo sevisa yakho
Ukuhamba okwenziwe lula nguNatvisa
ISILUMKISO SE-COVID19. Izithintelo zokuhamba kunye nokuhlolwa kokungena kwenzeka kwindawo yabahambi abafika bevela kwamanye amazwe okanye imimandla enendawo ethe gqolo yokusasazeka.
Ngo-2021, i-European Union (i-EU) iya kube iphumeze inkqubo yabo entsha yokurhoxisa visa. Le nkqubo ifuna ukuba abanye abahambi bafumane ukugunyaziswa kwangaphambili ngaphambi kokuba bangene kumazwe eSchengen Zone. Oku kunokubenza abanye abahambi babe novalo kodwa akufuneki! Nantsi into wonke umntu afuna ukuyazi malunga nale nkqubo ngaphambi kokuba aye eYurophu.
Ngubani ofuna ukuNcitshiswa kweVisa ye-ETIAS
Abahambi abavela kuluhlu oluthile lwamazwe baya kudinga ukufumana i-visa ye-ETIAS yokurhoxisa ngaphambi kokuba bangene kwi-European Union's Schengen Zone. Uninzi lwaba bahambi aludingi sigunyaziso sokuya eYurophu ngaphambili. Nangona kunjalo, ayisiyi-visa! Yindlela yexabiso eliphantsi yokuba i-EU igcine abemi bayo kunye nabahambi bekhuselekile ngokungavumeli ukutyelelwa ngabantu abanokuba yingozi okanye babandakanyeke kwimisebenzi yobunqolobi.
Inkqubo ye-ETIAS ibhetele kakhulu kunokufumana i-visa! Izibonelelo zibandakanya:
Isicelo siya kuba lula kwaye sifumaneke kwi-Intanethi
Akukho tyelelo lozakuzo kwaye abahambi abanakuze bohlulwe kwiipaspoti zabo
Akukho xwebhu lwephepha luyimfuneko njengoko yonke into isingathwa ngekhompyutha
Ukurhoxiswa kwe-visa yindleko ephantsi ngoko ke iindleko akufuneki zithintele uhambo oluya kumfanekiso waseYurophu
Ukurhoxiswa kwe-visa ye-ETIAS kusebenzela ukhenketho lweshishini kunye nokhenketho. Iindwendwe ezihambela ezinye iinjongo ziya kufuna ukufumana uhlobo olwahlukileyo lwemvume yokuhamba.
Iimfuneko zokufaka isicelo sokuNikwa iVisa ye-ETIAS
Ukufaka isicelo sokurhoxiswa kwe-visa ye-ETIAS ngokuthe ngqo kwaye kuya kuthatha kuphela imizuzu eli-10-15. Ngaphambi kokuba bafake isicelo, abahambi kufuneka babe:
Idilesi ye-imeyile evumelekileyo
Ipasipoti yabo esebenzayo kunye neenyanga ezi-6 ezishiyekileyo ngaphambi kokuba iphelelwe
Kuya kufuneka baphinde bajonge ukuqinisekisa ukuba bavela kwilizwe elilungeleyo ukurhoxiswa kwe-visa ye-ETIAS. Emva koko, bafuna kuphela ukufikelela kwi-intanethi kunye nenxalenye encinci yexesha, apho banokugcwalisa khona isicelo.
Isebenza njani iNkqubo ye-ETIAS Visa Waiver System
Nje ukuba bakulungele ukuya, abafaki zicelo bangagcwalisa isicelo sokurhoxisa i-ETIAS apha. Inkqubo ilula kwaye kukho imiyalelo yenyathelo ngalinye lesicelo. Kuya kufuneka baqinisekise ukuba:
Faka ulwazi lokuchonga kanye njengoko lubonakala kwipaspoti yabo
Faka ngokuchanekileyo isixeko apho baya kungena kwindawo yeSchengen
Ukunyaniseka ngokupheleleyo malunga nolwazi abangena kulo kwisicelo
Nje ukuba isicelo sigqitywe, abahambi bangahlawula kwi-intanethi, emva koko bangenise isicelo. Idatha yabo iya kujongwa ngokuchasene noovimba beenkcukacha. Xa ukuvunywa kwe-visa kuvunyiwe, baya kufumana i-imeyile. Ngelixa kungekho mfuneko yokuba baphathe ubungqina bokwamkelwa kwabo ukurhoxisa i-visa ye-ETIAS, banokufuna ukuyiprinta le imeyile ukuze bayiphathe xa kunokwenzeka.
Uninzi lwabahambi luza kuva malunga nenqanaba labo lokundwendwela phantse kwangoko. Amanye amatyala aya kuthatha iintsuku ezimbalwa ukuqhubekeka, ngelixa amanye enokuthatha ukuya kwiiveki ezintathu. Konke kuya kuba luncedo, nangona kunjalo, kuba uhambo oluya eYurophu luhlala luyinto entle.
Natvisa kwezinye iilwimi
© 2020 NATVISA.COM. Onke amalungelo agciniwe